Paralympic menduru yegoridhe Marieke Vervoort anogumisa hupenyu hwake muBelgium | 1xbet
Paralympian Marieke Vervoort akati zuva racho parakasvika, akasaina mapepa euthanasia uye akagadzirira kupedza hupenyu hwake. Zuva iri rakauya neChipiri munyika yaakaberekerwa muBelgium, kufa kwake kwakasimbiswa muchirevo kubva kuguta reDiest. mamwe mamenduru makore matatu apfuura muRio de Janeiro.Marieke Vervoort anoramba kuronga kuzviuraya pakarepo mushure meRio Paralympics Verenga zvakawanda
Mubvunzurudzo kuParalympics muRio, Vervoort akarondedzera kugara nemarwadzo asingagurike kubva kune isingarapike, inodzora. chirwere chepelinha.Akataura zvekurara maminetsi gumi chete husiku, akarondedzera kurwadziwa kwakakonzera kuti vamwe vapfuure vachimutarisa chete, uye akatsanangura kuti mutambo wakamuraramisa sei.
“Zvakanyanya kuomera muviri wangu,” akadaro Vervoort iyo 2016 hurukuro. “Kudzidziswa kwega kwega ndiri kutambura nekuda kwekurwadziwa. Rudzi rwese ini ndinodzidzira nesimba. Kudzidzira uye kukwira uye kuita makwikwi ndiwo mushonga kwandiri. Ini ndinosunda zvakanyanya – kusundidzira chaiko kutya kwangu kwese nezvose kure. ”
Vervoort aive mutsigiri akasimba wekodzero yekusarudza euthanasia, zviri pamutemo muBelgium.Kufanana nekudzidzira zvakaoma, akati zvakamupa masimba uye akaisa “hupenyu hwangu ndimene mumaoko angu”.
“Ndiri kutya chaizvo, asi iwo (euthanasia) mapepa anondipa runyararo rwepfungwa nekuti Ndinoziva kana zvaringana kwandiri, ndine mapepa iwayo, ”akadaro. “Dai ndisina mapepa iwayo, ndinofunga dai ndakatozviuraya kare. Ini ndinofunga pachave nekuzviuraya kushoma kana nyika yega yega iine mutemo we euthanasia. Ndinovimba munhu wese anoona kuti uku hakusi kuponda, asi kunoita kuti vanhu vararame kwenguva yakareba. ”
Vervoort zvakare akabatwa nepfari uye akabata imwe mugore ra2014 apo aibika pasita uye achidira mvura inofashaira pamusoro pemakumbo ake. Izvi zvakaguma nekugara muchipatara kwemwedzi mina.Zenn akadhonzawo masokisi ake kubva mudhodhi remasokisi, akadaro, uye akabatsira kutakura zvekutengesa kumba kana Vervoort yatenga yakawandisa. “Pandinozoita kurwara nepfari, anondiyambira awa rimwe chete zvisati zvaitika,” akadaro Vervoort. “Handizive kuti anonzwa sei.” Iye akati anogona kusarwadziwa-kweminiti, uye opotsa kupfuura maminetsi mashoma gare gare. “Unofanirwa kurarama zuva nezuva uye unakirwe nenguva diki,” akadaro. “Wese munhu mangwana anogona kuita tsaona yemotokari akafa, kana chirwere chemwoyo akafa. Inogona kunge iri mangwana kumunhu wese. ”
Vervoort akazviti” mukadzi anopenga “.Akataura zvekubhururuka muF-16 murwi wejeti, akatasva mota yerally, uye aive achichengetedza mamuseum ehupenyu hwake achidzokera kungangoita gumi nemana paakangoonekwa aine chirwere chake chisingawanzoitika. Aive nevhudzi rinopisa uye aida kuyeukwa semukadzi anga “achigara achiseka, achigara achinyemwerera”.
“Ini ndinonzwa ndakasiyana nerufu ikozvino kupfuura makore apfuura,” akadaro Vervoort. “Kwandiri I think rufu chinhu chakaita sevanokuvhiya, unoenda kunorara haumbomuka. Kwandiri chimwe chinhu chine rugare. “